आयोजकले नपत्याएकि टिकाले पाइन लाखौ फ्यानको सपोर्ट, टिका बिनाको इन्द्रेणी नहेर्ने चेता'वनी [भिडियो] - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/आयोजकले नपत्याएकि टिकाले पाइन लाखौ फ्यानको सपोर्ट, टिका बिनाको इन्द्रेणी नहेर्ने चेता’वनी [भिडियो]
4,4793minutes read
टिका सानु विनै इन्द्रेणी टिम इन्डिया पुगेपछि लाखौ फ्यानहरुले उनका लागि सहानुभूति प्रकट गरेका छन् ! टिका सानु बिनाको इन्द्रेणी टिमलाई आयोजक टिमले इन्डिया बोलाएपछि टिका सानुले आफ्नो सामाजिक संजालमा दिएको भाबुक प्रतिक्रियापछि उनका लाखौ फ्यानहरुले उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका हुन् !
आयोजकले टिका सानुलाई नल्याएर कार्यक्रममा आउनु भन्ने खबर पाएपछि उनि इन्डिया नगएको बताएकि थिइन् ! त्यसपछि आयोजक टिम प्रति फ्यानहरुले कडा आक्रोस पोखेका थिए !
फन्टुस आयोजक भन्दै आयोजक प्रति टिका सानुका फ्यानहरुले सामाजिक संजालमा आफ्नो आक्रोस पोखेका छन् !
केहि फ्यानहरुले भने टिका बिनाको इन्द्रेणी कार्यक्रम नहेर्ने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन् ! यसअघि टिका सानु विनै इन्द्रेणी टिम इन्डिया पुग्यो, लेखिन सामाजिक संजालमा भावुक स्टाटस भन्ने शिर्षकमा युटुबमा प्रसारण भएको भिडियो रिपोर्टपछि ‘टिका सानु नभए अब इन्द्रेणी नहेर्ने भन्दै प्रतिक्विया समेत दिएका छन् !
बाबु शर्मा नामगरेका एक जना फ्यानले टिका सानु बिनाको इन्द्रेणी नहेर्ने घोषणा गरेका छन् ! उनि लगायत कैयौ फ्यानले टिका बिनाको इन्द्रेणी कार्यक्रम खल्लो लाग्ने भएकोले कार्यक्रम नै नहेर्ने बताएका हुन् !
टिका सानु बिनाको इन्द्रेणी खल्लो लाग्ने धेरै फ्यानहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ! इन्द्रेणी कार्यक्रमबाटै दर्शक स्रोताहरुको मन जित्न सफल गायिका टिका सानु पछिल्लो समय लाखौ स्रोताहरुले फलो गरिरहेका छन् !
गङ्गा न्यौपाने नाम गरेकी फ्यानले भनेकि छन् आयोजक ‘फन्टुस् रैछ ” टीकालाई यसरी तोकेर भन्नू अधिकार उसलाई थिएन ? टीका बिना त इन्द्रेणी पनि खल्लो हुन्छ त !
त्यस्तै अर्का एक फ्यानले मार्मिक भनाइ राखेका छन् ! टीका बहिनी केही चिन्ता लिनु पर्दैन, जाबाे एउटा कार्यक्रम छुट्टिदैमा के हुन्छ र तीन कराेड दर्शक तपाईँकाे साथमा छन् त्यति ठुलाे दुख मान्नै पर्ने कुरा केही छैन ! अझ झन् आत्म बल बड्छ त्याे मात्रै छ र याे सँसारमा आयोजक, अगाडि बड्दै जानू, खुसी मिल्ने छ। घटिया साेच भकाे आयाेजककाे कार्यक्रममा जान पनि हुदैन ।’
माया तामाङ्ग मोक्तानले इन्द्रेणी टिम र कृष्ण कंडेल प्रति मन नदुखाउन आग्रह गर्दै कसैले टुटाउन फ़ुटाउन यस्तो षड्यन्त्र गरेको हुन सक्ने बताएकी छिन ! उनले भनेकी छिन, यो सबै आयोजकको कमि कमजोरी हो, टीका दि हजुरले कृष्ण दाइ र इन्द्रेणी टिम माथी मन नदुखाउनु हजुरहरुलाई टुटाउन फुटाउन पनि यो सबै गरेको हुनु सक्छ ! सातै रङ्गको इन्द्रेणीमा कहिले कालो बादल नलागोस हे पशुपतिनाथ यहि प्राथना छ हाम्रो !
धेरै दर्शक स्रोता तथा फ्यानहरुको प्रतिक्रिया छ, ‘टिका सानु बिनाको इन्द्रेणी खल्लो हुन्छ’ ! यो बिषय सर्बाधिक उठानको बिषय बनेको छ !
अनिल जोसी भन्छन, टीका सानू दिदि इन्द्रेणीमा नभए हामी कहिलै इन्द्रेणी नि हेर्दैनौ र टीका सानू दिदिलाइ इन्द्रेणीमा नलिनु भनेको इन्द्रेणी टिम पछि पर्नु हो !
कोहि फ्यानहरुले भने इन्द्रेणी टिम प्रति प्रश्न उठाएका छन् ! मोतीराम भन्छन, टीका सानू नगए इन्द्रेनी टिमले जबाक दिनु थियो कि टीका हाम्रो निअमित गायिका हुन, सरि हामी उनी बिना जान सक्देनौ !
आकाश कार्कीले एक मार्मिक भनाइ राखेका छन् ! इन्द्रेणी कार्यक्रम हजारौं हजार दर्शकको मनमुटुमा बसेको एक लोक प्रिय कार्यक्रम हो र उक्त इन्द्रेणी कार्यक्रममा टीका सानूको प्रवेश पछि अझै उचाइमा आएको हो ! हजारौं दर्शकको मन मुटुमा बस्न सफल भएकी एक चर्चित गायिका हुन टीका सानू र उनको दोहोरी गाउने शैली, उनको खुवी पनि दर्शकहरुले उत्तिकै रुचाउँछन् तर दुखको कुरा आज इन्द्रेणी टिम भारत जादा किन टीकालाई पन्छाईयो? आखिर टीका पनि त इन्द्रेणी समाजका एक सदस्य हुन ! एउटै घरको परिवार जस्तै हो तर यसरी पन्छ्याउदा अलिकति भएनी मन त दुखी हालछनी ! केही छैन टीका जी ईन्डियाको कार्यक्रममा तपाईंको उपस्थिति न भएता पनि हजारौं दर्शकहरुले तपाईंलाई टीका खोइ भनेर सोधपुछ गरेका थिए र धेरैको गुनासो पनि रहेको थियोे तपाईं जहाँ भए पनि तपाईंको कला गलालाई सधै संमान गर्नेछौ हामी दर्शकहरुको माया र साथ सधै तपाई संघ रहिरहनेछ ! जय गीत जय संगीत !
फ्यानहरुका यी भनाइहरु यस अघिको भिडियो रिपोर्टमा भेटिएका कमेन्टहरु हुन् ! थुप्रै कमेन्टहरु रिपोर्टमा समेट्न सकेका छैनौ तर बिशेष कमेन्टहरु टिपोट गरेका हौ ! टिका सानुलाई साथ् दिनुपर्छ भन्नेहरुले कमेन्ट गर्न सक्नु हुनेछ !
यस अघिको उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको स्टाटस यस्तो छ
सन्सार कै लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी समूह अहिले कार्यक्रम को लागि नया दिल्ली पुगेको छ । यस्मा म निकै खुशी छु ।
अहिले को नया दिल्लिको कार्यक्रम मा हजुर किन न आयको भनेर मलाइ हजारजना मेरा दर्सकस्रोताहरुले मलाइ sms गरेर सोध्नुभयो मैले यकयक गरि सबैलाइ जवाफ दिन सकिन, तेसैले मेरो आधिकारिक लाइक पेज बाट सबैलाइ यकमुस्ट जानकारी गराउदै छु ।
इन्डिया बाट कार्यक्रम को कुरा गर्न आउनुभयको दाइ ले भन्नुभयछ ,, इन्द्रेणी टिम लानी टीका बाहेक को ।
कृष्ण दाइ ले सोध्नुभयछ किन? उहाले उत्तर दिनुभयछ कि
तिज सिजन मा कतार मा मेरो साथिले आयोजना गरेको कार्यक्रम मा उस्ले धोका दि ! तेसैले टीका लाई पनि मैले इन्डिया लगेर कार्यक्रम गरे भने मलाइ मार्छन मेरो साथी हरु रिसाउछन ।
यत्ती सुने पछि म जान उचित ठानिन किन कि त्यो जुन तिज बेलाको कुरा आयो बुझ्ने ले पो बुझ्छ म कति अप्ठ्यारोमा थिय ( दाङ देउखुरी सेवा समाज दोहा कतार ) ले आयोजना गरेको तिज मिलन कार्यक्रम मा चाहेर धोका दियको होइन अझै पनि त्यो सस्था प्रती म अति नजिक छु जस्तो लाग्छ !! मैले जानेर दियको धोका होइन भनेर मैले बार बार भन्दा पनि यत्ती सम्म गर्न सक्ने मान्छेहरु लाई के भन्नू?
मलाइ यो कुरा मा दुख भन्दा पनि धेरै खुशी लागेको छ जब इन्द्रेणी टिम इन्डिया को यात्रा मा भनेर यरपोट मा खिचियको तस्बिर सहित को इन्द्रेणी समाज मा आयको समाचार मा मलाई धेरै धेरै ले सोध्नुभयो ? कमेन्ट मा प्रतेक ले टीका खोइ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । मैले यतिन्जेल सम्म गरेको संघर्ष चिन्ने मेरा दर्सकभगवान हरु लाई मुरि मुरि धन्यवाद ।
नया दिल्ली मा टीका सानू र टीका का दोहोरी हरु मन पराउनी सम्पुर्ण लाई मीठो सम्झना ।
कलाकार हरुको वास्तविक बाध्यता नबुझी विभिन्न आरोप लगाउदै हर स्थान का कार्यक्रम बाट बहिस्कार गरे पनि मलाइ गर्व छ कि दर्सक को रोजि र खोजी त छनी ।तर कुरा यत्ती हो खादै नखाय को बीस लाग्नु र कसैले नामै तोकेर टीका सानू लाई टिम मा नल्याउनु भन्दा कता कता मन सारै दुख्दो रैछ।तर पनि म खुसी नै छु मुरि मुरि धन्यबाद ती आयोजक ज्यु हरु लाई जस्ले आफ्नै कार्यक्रम मा उपस्थित हुने दर्शक को भावना लाई समेत कुल्चेर मसङ्ग प्रतिसोध लिन खोज्नु भो , तपाई हरु को सधै जय होस म दुखी को त जे सुकै भय होस ।
कफी पिउने नेपाली बढे, उत्पादन बर्षेनी घट्दै
टोखा–छहरे सडक : ३२ किमि सडक, ७ किमि सुरुङमार्ग
सिन्धुपाल्चोक प्रहरी चौकीमा कसले गर्यो आ’क्रमण ? पढ्नुस
विमलसहित चार फुटबल खेलाडीलाई लाग्यो प्रतिबन्ध